Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Tijaabo cusub oo kiliinig ah ayaa sahaminaysa kicinta maskaxda ee qoto dheer si loogu daweeyo Alzheimers
Dhakhaatiirta Shabakadda Caafimaadka Allegheny (AHN) waxay ku biireen tijaabo caafimaad oo taariikhi ah oo sahaminaysa badbaadada iyo waxtarka daaweynta kicinta maskaxda qoto dheer si loogu daweeyo cudurka Alzheimers. Waxaa hogaaminaya Donald Whiting, MD, gudoomiyaha AHN's Neurosciences Institute, Madaxa Caafimaadka AHN, iyo hormuudka isticmaalka DBS si loo daaweeyo xaalado kala duwan oo neerfaha daciifiya, ADvance II Study waa marxalad caalami ah 3 tijaabo caafimaad oo la bixiyo oo kaliya xarumaha caafimaadka ee la xusho ee aduunka oo dhan.
"Waxaan ka ogaanay isticmaalkeena DBS ku dhawaad ​​labaatan sano si aan u daweyno ciladaha dhaqdhaqaaqa sida Parkinson's iyo gariir lama huraan ah in nidaamku yahay daweyn badbaado leh oo guud ahaan si wanaagsan loo dulqaatay," ayuu yiri Dr. Whiting. In ka badan 160,000 qof oo adduunka oo dhan ah ayaa helay daaweynta DBS ee xaaladahaas.
AHN waa mid ka mid ah 20ka goobood ee Maraykanka ee loo doortay inay ka qaybqaataan Daraasadda ADvance II oo sidoo kale lagu qabto Kanada iyo Jarmalka.
Cudurka Alzheimers waa nooca ugu badan ee waallida. Qiyaastii 6.2 milyan, ama mid ka mid ah sagaalkii Maraykan ah ee da'doodu tahay 65 iyo ka weyn ayaa la nool Alzheimers; 72 boqolkiiba waa 75 jir ama ka weyn. Alzheimer's waa cudur horusocod ah oo marxaladihiisa dambe, neerfayaasha qaybaha maskaxda ee qofka u suurtageliya inuu fuliyo hawlaha aasaasiga ah ee jidhka, sida socodka iyo liqidda. Cudurka ayaa ugu dambeyntii dilaa ah oo aan la helin dawo la og yahay.
DBS ee Alzheimers waxay ku lug leedahay isticmaalka qalab la rakibay oo la mid ah wadnaha garaaca wadnaha iyo laba fiilo oo ku dheggan kuwaas oo si toos ah u keena garaaca korantada khafiifka ah aagga maskaxda ee loo yaqaan fornix (DBS-f), kaas oo la xidhiidha xusuusta iyo barashada. Kicinta korantada ayaa la rumeysan yahay inay dhaqaajiso wareegga xusuusta ee maskaxda si ay u afeysato shaqadeeda.
Daraasadda la kala soocay, laba-indho-la'aanta ah waxay socon doontaa afar sano ka qaybgalayaasha, kuwaas oo mid walba uu mari doono qiimeynta Alzheimers oo la jaan-qaaday ka hor inta aan la gelin neurostimulator-ka. Natiijooyinka qiimayntan jireed, maskaxeed, iyo garaadka ayaa loo isticmaali doonaa sida cabbirka aasaasiga ah maadaama si joogto ah loo qiimeeyo heerka horumarka Alzheimers inta lagu jiro daraasadda.
Tallaalka ka dib, saddex-meelood laba meel bukaannada ayaa la kala soocay si loo hawlgeliyo neurostimulator-kooda oo saddex-meeloodow meel ayaa laga saari doonaa qalabkooda. Bukaanka uu qalabkoodu dansan yahay bilowga daraasadda waxa la hawlgelinayaa 12 bilood ka dib.
Inta lagu jiro tijaabada bukaan-socodka, ka-qaybgalayaasha daraasadda waxaa kormeeri doona koox cilmi-nafsiyeedyo badan oo AHN neurologists, dhakhaatiirta cilmi-nafsiga iyo dhakhaatiirta neerfayaasha, oo ay ku jiraan Dr. Whiting iyo saaxiibkii AHN neurosurgeon iyo khabiir DBS Nestor Tomycz, MD.
Si aad ugu qalanto tijaabada, bukaanadu waa inay ahaadaan 65 ama ka weyn, laga helay Alzheimers fudud, caafimaadkoodu si kale fiican yahay, oo ay leeyihiin daryeele ama xubin qoys oo loo qoondeeyay oo u raaci doona booqashooyinka dhakhtarka.
"Natiijooyinka wejiyadii hore ee tijaabadan caafimaad ayaa ah kuwo rajo leh waxayna tilmaamayaan in daawadu ay ka faa'iidaysan karto bukaannada qaba Alzheimers fudud iyadoo la dejinayo lana hagaajinayo shaqadooda garashada," ayuu yiri Dr. Whiting. "In la yiraahdo natiijada guusha leh ee daraasaddan waxay u noqon kartaa nolosha malaayiin Maraykan ah oo ay saameeyeen tan daciifka ah, cudurka dilaaga ah maaha mid la dhayalsan karo. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqono kooxaha qalliinka caanka ah ee adduunka oo siinaya bukaannada Alzheimers inay helaan hal-abuurkan.
Hoggaanka Dr. Whiting, Isbitaalka Guud ee AHN ee Allegheny ayaa muddo dheer safka hore kaga jiray dadaallada hormuudka ah ee lagu hormarinayo isticmaalka kicinta maskaxda qoto dheer. Isbitaalku wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee galbeedka Pennsylvania si uu u isticmaalo tignoolajiyada lagu daweeyo gariirka muhiimka ah iyo Cudurka Parkinson, iyo dhawaanahan, Dr. Whiting iyo kooxdiisu waxay bilaabeen wajigii labaad ee tijaabo caafimaad oo sahaminta waxtarka DBS si ay uga caawiso maaraynta buurnaanta jirrada.
Kristin Smeltzer wuxuu leeyahay,
Janaayo 25, 2022 markay tahay 08:17
Ninkeyga waxaa laga helay cudurka Parkinson ee bilawgii hore isagoo 67 jir ah. Astaamihiisa waxaa ka mid ahaa cago-gariir, hadal qallafsan, hadal mug yar, hoos u dhigidda qorista, xirfadda wadista cabsida, iyo cududdiisa midig waxa lagu hayaa xagal 45 darajo ah. Waxaa la saaray Sinemet muddo 7 bilood ah ka dibna Sifrol iyo rotigotine ayaa la keenay kuwaas oo bedelay Sinemet laakiin waxay ku qasbanaadeen inuu joojiyo sababo la xiriira. Waxaan isku daynay tallaal kasta oo la heli karo, laakiin ma jiraan wax shaqeynaya. Wax yar oo horumar ah ayaa laga gaaray helida daawaynta la isku halayn karo, waxaan iska daayay daawoyinkayga waxyeellooyin aan soo gaadhnay awgeed. Daryeel bixiyahayagu wuxuu na baray Kiliniga Caafimaadka Kycuyu daawaynta dhirta ee Parkinson. Daawadu waa mucjiso. Ninkeyga aad buu u bogsaday! Booqo kycuyuhealthclinic. co m
Mary belinda wuxuu leeyahay,
Janaayo 22, 2022 markay tahay 17:15
Ninkeyga waxaa laga helay cudurka Parkinson 2 sano ka hor, markii uu ahaa 59. Waxa uu lahaa muuqaal foorarsan, gariir, gacanta midig ma dhaqaaqdo iyo sidoo kale dareen garaaca jirkiisa. Waxaa la saaray Senemet 8 bilood ka dibna Siferol ayaa la soo bandhigay oo bedelay Senemet, muddadaas waxaa sidoo kale laga helay waallida. Waxa uu bilaabay in uu male-awaal yeesho, xidhiidhkiina wuu ka lumay. Anigoo ka shakisan inay daawadu tahay ayaan ka saaray Siferol (iyada oo dhakhtarku og yahay) isaga oo ku saaraya PD-da caanaha dhirta dabiiciga ah ee aanu ka dalbanay TREE OF LIFE HEALTH CLINIC, calaamadihiisa ayaa gabi ahaanba hoos u dhacay muddo 3 toddobaad ah isticmaalka geedka CAAFIMAADKA NOLOSHA Cudurka dabiiciga ah ee Parkinson caanaha dhirta. Hadda wuxuu ku dhow yahay 61 jir aad ayuuna u wanaagsan yahay, cudurku gebi ahaanba wuu beddelay! (ww. treeoflifeherbalclinic .com)